Simukai homwe vaiti & vatengesi - China Simukai homwe fekitari
Kraft bepa simuka homwe bepa simuka homwe inzira inonyanyo kuzivikanwa yekupakata musika nekuti iyi fomu yekupakata inochinjika uye inoshanda pamwe nekuyevedza. Seizvo zita pacharo rinoratidza, aya mabhegi anokwanisa kumira munzvimbo dzese dzakaomarara. Iyo ine yakakura shefu yekuratidzira kugona uye ivo vanogona kudzora ekuchengetedza zvinodiwa uye nekuwedzera shefu nzvimbo. Kazhinji, iyo simuka homwe inonyanya kushandiswa pane chinwiwa, condiment, zvishongo, tii kana kofi kurongedza. Properties of simuka homwe iyo s ...
Iyo Plastic simuka homwe ndiyo inonyanya kufarirwa kurongedza maitiro emusika nekuti iyi fomu yekupakata inochinjika uye inoshanda pamwe nekuyevedza. Seizvo zita pacharo rinoratidza, aya mabhegi anokwanisa kumira munzvimbo dzese dzakaomarara. Iyo ine yakakura shefu yekuratidzira kugona uye ivo vanogona kudzora ekuchengetedza zvinodiwa uye nekuwedzera shefu nzvimbo. Kazhinji, iyo simuka homwe inonyanya kushandiswa pane chinwiwa, zvinwiwa, zvishongo, tii kana kofi, Imbwa chikafu, Chipfuyo chikafu kurongedza. Zvivakwa zvePet chikafu chekupakata Iyo ...
Iyo simuka ziplock bhegi ndiyo inonyanya kufarirwa nzira yekutakura yemusika nekuti iyi fomu yekupakata inochinjika uye inoshanda pamwe nekuyevedza. Seizvo zita pacharo rinoratidza, aya mabhegi anokwanisa kumira munzvimbo dzese dzakaomarara. Iyo ine yakakura shefu yekuratidzira kugona uye ivo vanogona kudzora ekuchengetedza zvinodiwa uye nekuwedzera shefu nzvimbo. Kazhinji, bhegi rekumira rinonyanya kushandiswa pane chikafu, zvinwiwa, zvishongo, tii kana kofi, Chikafu chembwa, Chikafu chechipfuwo, uye nhumbi dzekupakata. Zvakakodzera ...